Fetin’ny noely sy ny faran’ny taona Hamalifaly ny fianakaviana ny “startimes”
Iray volana mahery sisa dia higadona ny fetin’ny Noely. Ho avy manaraka azy ihany koa ny fetin’ny faran’ny taona, izay tena manan-danja ho an’ny fianakaviana tokoa.
Hiara-kankalaza azy io amin’ny isan-tokantrano ny startimes. Mahazo “abonnement” roa volana izay mividy décodeur iray ahitana ny karazana chaînes rehetra. Hotolorana “abonnement” 15 andro fanampiny maimaimpoana kosa ireo manao “réabonnement” iray volana sy tapany amin’ny alalan’ny “application”. Nambaran’Atoa Aina Ralai, tale ara-barotry ny Startimes, fa azo jifaina manomboka izao ka hatramin’ny faran’ny volana janoary taona 2019 io tolotra io. Hahazo tombontsoa avokoa ny rehetra. Ho an’ny lehilahy, ohatra, dia hanana chaînes miisa 12 hiompana amin’ny fanatanjahantena fotsiny izy ireo. Tafiditra ao ilay lalao baolina kitra iadiana ny tompondaka ao Italie (Copa Italia) lalao hanomboka ny 04 desambra ho avy izao, ahitana an’ilay mpilalao baolina kitra malaza Ronaldo. Chaînes enina kosa no hatokana ho an’ny ankizy raha chaines miisa sivy be izao ny ho an’ireo vehivavy ahitana karazana serie. Azo raisina amin’ny alalan’ny startimes koa ireo televiziona eto an-toerana toy ny MBS TV….20.000 Ar no vidin’ny “bouquet startimes smart” misy « chaînes » mihoatra ny 70 raha 40.000 Ariary kosa ny “bouquet startimes plus” izay ahitana chaînes mihoatra ny 100.